Interview with Bobby Anderson: Reflections from CDD
This is an interview with Bobby Anderson, who isaResearch Fellow at Chiang Mai University’s School of Public Policy, and works for the company Cardno. PK Forum asked about his reflections after working on CDD projects in different countries.
PKF - After working inarange of other countries on CDD, what has struck you about what is similar or different in the context of Myanmar? How do you feel this impacts on the approach to the NCDDP?
Large-scale, multi-year CDD projects change from country to country. While the on-the-ground, CDD project selection methodology doesn't really differ between, say, Indonesia and Myanmar, the means of implementation to, and that’s usually based on the capacity of the line ministry running the project. Myanmar’s NCDDP is run by the Department of Rural Development under the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, and they are present in all Union-controlled townships, but they were alsoafairly new department, so they did require some capacity building in the first years of implementation. The government tendered for contractors to assist in the initial start-up, through the provision of township technical assistance teams that were posted to townships to hire and manage the community and technical facilitators in the first two years of implementation. The handover to direct DRD management occurred in the third year. This model was adapted in reflection of the increased ability of government counterparts to run the show, so to speak. In Afghanistan, on the other hand, when I was working on the National Solidarity Program, contractors and NGOs directly implemented the project on an unlimited timeframe, with the Ministry providing oversight. In Indonesia, the Ministry of Home Affairs ran things with no contractors, and the World Bank provided Technical Assistance directly.
PKF - You have spoken previously about the need to have modest infrastructure centred goals for CDD, ie don't try to label it as 'conflict prevention', 'women's empowerment', or improving 'social cohesion'. What does this then mean for CDD style programs in conflict areas in Myanmar? Do have you have any concerns, for example if CDD programs were to expand toastate like Rakhine?
So long as the community-driven development methodology is abided, namely principles of inclusion and consensus, and no “shortcuts” are taken inarush to complete the bricks and mortar ofaproject at the expense of how the project was selected, thenaCDD project can’t help but be conflict – sensitive. In the conflict – affected areas of Myanmar, namely those under the control of ethnic armed groups, so long as those groups allow the project to occur, then NCDDP and other projects can serve as trust-building measures between communities. The same can occur in Rakhine. But the caveat I offer is “so long as the methodology is abided”. If it’s not, then the project is just another asset that can be captured, or weaponized inapre-existing fight.
PKF - The scale of the NCDDP - in the context ofaprevious 'aid orphan' like Myanmar - is enormous. The institutional reputation of the government, the World Bank, private providers like Cardno, and others, relies on the perceived success of NCDDP. I assume that this is not dissimilar from other countries where CDD has been prominent. Does this scale present challenges to honest and effective monitoring and learning?
NCDDP is huge, and thankfully, the implementation design reflects that. The project hadaslow rollout, with more and more townships starting up every year, and the operations manual was changed to reflect lessons learned with every new year of implementation and start-up. Each aspect of NCDDP is managed at the township level, with DRD and contractor oversight. The whole model, this horizontal implementation and M&E, really serves to spread risk and prevent blow-ups, or at the least to limit their scale. It’sagood system: it’s nationwide, but really community-owned.
PKF -In your experience around the world, what has been the most surprising success and failure of CDD?
The most surprising thing to me about CDD is the simplicity of the concept. In development and aid we tend to see an overcomplexification. CDD was the opposite and the first time I worked on it, in 2005, I hadakind of “voila!” moment that changed the way I saw development in general. It’s predicated on the fact that people know what they need. CDD has been around for over two decades now, but at the time of its inception, that concept was revolutionary.
As for failure, I always seeacertain amount of that creeping in over time. The first years of CDD programs areahoneymoon period with energetic new hires and volunteers that believe in the program. But across years, that changes. Once then initial and important needsacommunity might agree upon are met, meeting attendance declines, and really, who can blame people for that? Not showing up forameeting isavote in itself, and people have to makealiving. Free time is precious. Volunteer committees tend to haveapermanent membership after years, and you’ve got to have some level of relative wealth to have that kind of time in rural areas, so elite influence always grows. Community facilitator positions are supposed to be filled by young people, but young people have ambitions, and they get bored and move on inafew years. The people with less ambition stay and they get bored with their work, and in the end, it's just another job with lots of paperwork, and then people, both facilitators and volunteers, start figuring out shortcuts and gaming the system. Corruption cases increase too. This kind of lethargy, and the seeking of personal profit from public goods, arises in most human endeavors. That’s why the robustness of the monitoring and audit and oversight, programmatic and operational, takes on greater importance with every passing year.
ယခုဆောင်းပါးသည် ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ် ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒကျောင်း တွင် Research Fellow အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပြီး Cardno အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် Bobby Anderson နှင့် အင်တာဗျူးဖြစ်ပါသည်။ PK ဖိုရမ်မှCDDစီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သော၎င်း၏နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံမှသုံးသပ်ချက်များကိုမေးမြန်းထားပါသည်။
မေး - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD) ကို မတူညီတဲ့တိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးမှာ လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ မြန်မာပြည် အခြေအနေနဲ့ဆိုရင် ဘာတွေတူညီတာရှိလဲ၊ မတူညီတာရှိလဲ? ဒီအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ နည်းလမ်းအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ထင်သလဲ?
ဖြေ - အကြီးစား နှစ်ရှည်ဆောင်ရွက်ရတ့ လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေက နို်င်ငံတနိုင်ငံ နဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူနိုင်ဘူး။ မြေပြင်မှာ ဆောင်ရွက်မယ့် CDD စီမံကိန်းရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းက ဥပမာ မြန်မာနို်င်ငံ နဲ့အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နုိုင်ငံ အတွက် အများအားဖြင့် တူနုိုင်တယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့နည်းလမ်းတွေကတော့ CDD စီမံကိန်းကို အဓိက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ၀န်ကြီးဌာနရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့အများကြီး သက်ဆိုင်သွားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားလူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တာက ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (DRD) ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိပါတယ်။ ဒီဌာနက ပြည်ထောင်စုကလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့ မြို့နယ်အားလုံးမှာရှိပေမယ့် ဌာနအသစ်လိုမျိုးဖြစ်တာကြောင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်တဲ့ အစဦးနှစ်ကာလတွေမှာ စွမ်းရည်မြင့်တင်မှုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရက တင်ဒါခေါ်ပြီး ကနေဦးစတင်တဲ့ကာလမှာ မြို့နယ်အဆင့်မှာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတွေ၊ နည်းပညာ အထောက်အကူပြုတွေကို အလုပ်ခန့်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနုိုင်ဖို့ နည်းပညာအကူအညီပေးနုိုင်မယ့် အဖွဲ့တွေကို ပထမ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်တဲ့ နှစ်နှစ် မှာ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ DRD က တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲနုိုင်ဖို့ကို တတိယနှစ်မှာ လက်လွှဲပါတယ်။ ဒီပုံစံက ဘာကြောင့် ဆောင်ရွက်ရသလဲဆိုတော့ အစိုးရဌာတွေရဲ့ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နုိုင်မှု စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာတာကို ထင်ဟပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် ကျွန်တော် အမျိုးသားစည်းလုံးရေးစီမံကိန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ ကန်ထရိုက်တာတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက စီမံကိန်းကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိတိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးဌာနကတော့ အပေါ်ယံကြပ်မတ်ပေးတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘယ်ကန်ထရိုက်တာနဲ့မှ အလုပ်မလုပ်ပဲ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကတော့ တိုက်ရိုက်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်တယ်။
မေး - အရင်က ဆရာပြောဖူးတာက CDDစီမံကိန်းမှာ အခြေအခံအဆောက်အအုံအတွက် အနေတော်ဦးတည်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိသင့်တယ်လို့ပြောဖူးတယ်နော်။ ဥပမာ ဒီစီမံကိန်းကိုပဋိပက္ခကာကွယ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် လူထုစည်းလုံးရေးမြှင့်တင်ခြင်း စသဖြင့် တံဆိပ်မကပ်ဖို့ပေါ့။ ဒီလိုဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋိပက္ခဒဏ်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေမှာ CDD ပုံစံစီမံကိန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ဘယ်လို အဓိပ္ဗယ်သက်ရောက်မလဲ? ရခိုင်ပြည်နယ်လိုဒေသကို CDD စီမံကိန်းတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို စိုးရိမ်မှု တွေရှိမလဲ?
ဖြေ - လူထုဗဟိုပြုချည်းကပ်နည်းကိုလိုက်နာမယ် - ဥပမာပေးရရင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ သဘောတူညီမှုရယူဖို့ ချမှတ်ထားတဲ့မူတွေကိုလိုက်နာမယ်။ စီမံကိန်းပြီးမြောက်ဖို့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေကို သေချာရွေးချယ်မယ့်အစား ဖြတ်လမ်းအလျင်စလိုမလိုက်ဘူး။ ဒါတွေဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တော့ ဒီစီမံကိန်းက ပဋိပက္ခအကဲဆတ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံဒေသတွေ ဥပမာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ အာဏာသက် ရောက်မှုရှိတဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအဖွဲ့တွေကသာ စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရင် NCDDP နဲ့တခြားစီမံကိန်းတွေက ဒေသခံတွေကြားမှာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နို်င်မယ့်နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်း ရခိုင်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စကားရဲ့ သတိပေးထားချက်က ခုနက ပြောထားတဲ့ “နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာမှ ဖြစ်မှာပါ။” ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ဒီစီမံကိန်းက လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခမှာ အသုံးပြုခံရနို်င်၊ လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုနို်င်တဲ့ နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
မေး - အရင်က အထောက်အပံ့ကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့မြန်မာနို်င်ငံအတွက်က NCDDP ရဲ့ပမာဏက အရမ်းကြီးမားနေတယ်။ အစိုးရ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ပုဂ္ဂလိက၀န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်တဲ့ Cardno လိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ အခြားပါဝင်သူတွေရဲ့ ပုံရိပ်က NCDDP ရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ် မူတည်နေတယ်။ ဒါကလည်း CDD လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ကွာမယ်မထင်ဘူး။ ဒီကြီးမားတဲ့ပမာဏကြောင့် မှန်ကန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ အကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ သင်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိမလား?
ဖြေ - NCDDP က တကယ်ကိုကြီးမားတယ်။ ကျေးဇူးတင်စွာပဲ ဆောင်ရွက်ပုံဒီဇိုင်းကလည်း ဒါကို ထင်ဟပ်တယ်။ စီမံကိန်းကို တဖြေးဖြေး တိုးချဲ့တယ်။ တစ်နှစ်ပြီးမှ တစ်နှစ် မြို့နယ်တွေကို တိုးချဲ့တယ်။ နှစ်တိုင်းပဲ သင်ယူမှုတွေ အပေါ်အခြေခံပြီး စီမံကိန်းလက်စွဲကို ပြောင်းလဲတာတွေလုပ်တယ်။ NCDDP ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို မြို့နယ် အဆင့်မှာပဲ DRD နဲ့ ကန်ထရိုက်တာအဖွဲ့က ကြပ်မတ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲတယ်။ ဒီပုံစံ - အလျားလိုက်စီမံကိန်းဆောင် ရွက်ခြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်သုံးသပ်ခြင်းစနစ် - က ဖြစ်နို်င်ခြေရှိတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ဖြန့်ကျက်လိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ပြသာနာတခုခုအကြီးကြီးထဖြစ်ဖို့ ကာကွယ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း အနည်းဆုံးတော့ စီမံကိန်း ပမာဏကြီးတာကို ကန့်သတ် လိုက်သလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါက ကောင်းတဲ့စနစ်လို့ထင်တယ်။ တနိုင်ငံလုံး ဖြန့်ကျက်နေပေမယ့် တကယ်တော့ ဒေသခံတွေက ပိုင်တာဖြစ်တယ်။
မေး - ဆရာ့ နိုင်ငံတကာက အတွေ့အကြုံအရ CDD ရဲ့ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှု နဲ့ ကျရှုံးမှုဘာတွေ ဖြစ်မလဲ?
ဖြေ - ကျွန်တော့်အတွက် CDD နဲ့ပတ်သက်ပြီး အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးက သူ့သဘောတရားရဲ့ ရှင်းလင်းမှုဖြစ်တယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရေးကဏ္ဍမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့လေ့ရှိတာက လွန်ကဲတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်တယ်။ CDDကတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီစီမံကိန်းအတွက် ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာစလုပ်တော့ ကျွန်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍကိုကြည့်တဲ့အမြင်က တော်တော်ရှင်းလင်းလာတယ်။ အဓိကကဘယ်အပေါ်အခြေခံလည်းဆိုတော့ လူတွေက သူတို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကို သိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်။ CDD က အခုဆို ဆယ်စုနှစ် ၂ခု ကျော်လာပြီ ဒါပေမယ့် သူစတုန်းကဆိုရင် ဒီသဘောတရားက အရမ်းကို စွန့်ဦးတီထွင်သလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒါနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုတွေ့ ရတယ်။ CDD စတဲ့ပထမနှစ်တွေမှာဆိုရင် ပျားရည်ဆန်းကာလလိုပဲ ဒီစီမံကိန်းအပေါ်ယုံကြည်ကျတဲ့ တက်ကြွမှုအပြည့်နဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ လုပ်အားပေးတွေကို ခေါ်ကြတယ်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလာ တယ်။ ကနေဦးက ဒေသခံတွေလိုချင်ခဲ့တဲ့ ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေပြည့်မှီပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အစည်းအဝေးတက်တဲ့ လူဦးရေလည်း ကျလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ဘယ်သူက အပြစ်တင်လို့ရမလဲ? အစည်းအဝေးမလာတာကိုက မဲတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်။ လူတွေက သူတို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလည်း လုပ်ရဦးမယ်လေ။ အားလပ်ချိန်တွေ က တန်ဖိုးရှိတယ်။ လုပ်အားပေးကော်မတီတွေက နှစ်တွေကြာလာတော့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေလိုဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုကျေးလက်ဒေသမှာ အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကြွယ်ဝမှုအနည်းနဲ့အများရှိရမယ်လေ ဆိုတော့ အထူးလူတန်းစားတွေရဲ့ သြဇာသက်ရောက်မှုက ပိုကြီးလာတယ်။ လူထုစည်းလုံးရေးနေရာတွေကို လူငယ်တွေ က တာဝန်ယူဖို့ဖြစ်ပေမယ့် လူငယ်တွေက တခြားရည်မှန်းချက်တွေရှိမယ်။ ကြာလာတော့ သူတို့လည်း ဒီအလုပ် အပေါ် ငြီးငွေ့လာပြီး တခြားနေရာပြောင်းကုန်တယ်။ သိပ်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့သူတွေကတော့ ဆက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း အလုပ်အပေါ်ငြီးငွေ့လာတယ်။ ဆိုတော့ အဆုံးမှာ ဒါက စာရွက်စာတမ်း အဓိကလုပ်ရတဲ့ အလုပ်တခုသာဖြစ်လာတယ်။ နောက် ဒီလူတွေ - လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတွေနဲ့လုပ်အားပေးတွေ အနေနဲ့ ဖြတ်လမ်းတွေရှာလာပြီး ဒီစနစ်ကို ဘယ်လို ကစားရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။ အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလည်း များလာတယ်။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားမှုလျော့သွားတာတွေ၊ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကနေ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာတွေက ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာ တော်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်တာ၊ စာရင်းစစ်တာ၊ ကြပ်မတ်တာကို စီမံကိန်းရေးဆွဲတဲ့အခါနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက် တဲ့အခါမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့ အတွက် တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ပိုပြီး အရေးကြီးလာတာဖြစ်တယ်။
photo accessed from VNG International webpage